Na-akụ ma na-elekọta | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Na-akụ ma na-elekọta
Esi eto eto zucchini n'ubi ubi ubi
Zucchini dị ezigbo mkpa maka nri maka ire ụtọ na-edozi ahụ. A na-eji ya akwadebe ọ bụghị naanị izu ohi na caviar a ma ama, ma ọbụna jam dị mma. Nri akwukwo nri a adiwo otutu oge na otutu ebe ndi ozo. Squashes dị nnọọ mfe n'ịgha ihe ma na-elekọta ubi, ha nwere ike toro ma site na osisi na site na seedlings.
Na-akụ hazelnuts n'ogige: elekọta na cultivation
A na-ewere Hazel n'ọtụtụ mba dị ka osisi dị omimi, nke akụkọ akụkọ, akụkọ ntụrụndụ na nkwenkwe ụgha gbara ya gburugburu. Dịka ọmụmaatụ, ndị Slav weere na osisi a dị ọcha ma dị nsọ, ya mere, n'oge égbè eluigwe nke ha zoro n'okpuru ya, jiri belt ahụ kwụsị alaka ndị ahụ ma tinye ha n'ebe ha chọrọ ichebe site na àmụmà. Kedu ihe dị mma nke osisi a na otu esi eto ya n'ụlọ, anyị na-akọwa n'okpuru ebe a.
Ihe niile ị ga - achọ ịma maka na - eto eto Colonseum (Kolhikum)
Colchicum (lat. Colchicum), aka Kolhikum ma ọ bụ Osennik - osisi nke ọdịdị nke okooko osisi perennials. Ndị Colchicans nọ n'ezinụlọ ndị nwe obodo, ebe ha na-ekesa bụ Central na West Asia, Europe na Mediterranean, na North Africa. Aha Latin nke crocus oge mgbapụta sitere na okwu Kolkhis, nke pụtara Kolkhida.